Tokony Hivezivezy any Meksiko ve Ianao Amin'ny Fotoam-pisotroana?
Inona no tokony hatao raha mitrona mandritra ny fialan-tsasatra Meksikana ianao
Mety efa nanamarina ny toetr'andro ianao mialoha ny fitsidihanao an'i Meksika, saingy aza matahotra raha mahita kalandrie feno rahona sy orana mialoha. Ny fotoana ririnina any Meksika dia tena mahafinaritra tokoa, ary tsy voatery ho fotoan-tsarotra hitsidihana mihitsy izany, ary ny orana dia mahatonga ny zavamaniry ho maitso sy be dia be.
Amin'ny vanim-potoanan'ny orana?
Ny vanim-potoanan'ny reny any afovoan-tany sy atsimon'i Meksika dia maharitra hatramin'ny volana Mey na Jona hatramin'ny Oktobra na Novambra.
Ny rivo-doza sy ny oram-baratra tropikaly dia afaka mandeha an-tanan-tanana amin'ny fotoanan'ny orana, noho izany dia mamaky ny fizotran'ny rivo-doza koa. Ny vanim-potoanan'ny reny dia tsy zava-dehibe ho an'ireo mpandeha any amin'ny faritra avaratr'i Meksika na ao amin'ny Saikinosy Baja, satria kely ny orana ao, fa ny mpandeha any afovoan-tany sy atsimon'i Meksika dia tokony hitazona izany ao an-tsaina rehefa manomana ny diany.
Tombantombana momba ny fitsangatsanganana avy any amin'ny fizaran-taona:
Mandritra ny vanim-potoanan'ny orana dia mivadika maitso sy maitso ny landscapes. Ny orana koa dia mampidina ny mari-pana mba tsy ho hafiriana loatra ny toetrandro raha tsy izany. Amin'ny ankapobeny dia ny orana amin'ny tolakandro sy takariva ary andro vitsy dia ny orana isan'andro - matetika ianao dia afaka mitsidika toeram-pitsangatsanganana eny amoron-dranomasina amin'ny maraina, ary raha avy ny orana amin'ny tolakandro dia azonao atao ny mikaroka hetsika indraindray mba hankafizana. Manaova drafitra ny asa ataonao mandritra ny tontolo andro, mba hahafahanao manararaotra ny masoandro raha tsy izany, ary misafidiana amin'ireto asa atao manaraka ireto rehefa avy ny orana isaky ny orana na ny orana manorana.
Tsidiho ny tranombakoka na toeram-pandehanana hafa. Ny toerana meksikana rehetra dia manana tranom-bakoka na tranokala manan-tantara hitsidika azy ireo ary hankafizinao raha toa ka mamiratra ny masoandro na tsia.
Mialà eny ambanin'ny tany na eny ambany rano: andro tsara ny orana mba hijerena lava-bato sy cenotes , izay tsy ahafantaranao akory ny toetry ny toetrandro.
Loha mankany amin'ny spa. Ny fitsaboana spa iray mahavariana dia fomba tsara handaniana ny fotoanao, na dia eo aza ny toetr'andro, fa mbola ho tianao kokoa aza raha mbola fantatrao fa tsy ho tapitra amin'ny masoandro ianao.
Ohatra azafady tequila na mezcal . Raha manondraka anao ny orana, ny fomba tsara hanentanana ny fanahinao dia ny manandratra fanahy meksikanina fitaratra.
Raiso ny kilasin-tsakafo Meksikana. Mianara mikasika ny sakafo Meksikana sy ireo zavatra entina hanamboarana azy manokana, ary avy eo mankafy ny sasany amin'ireo sakafo tsara ireo.
Mitadiava sarimihetsika. Horonan-tsary Hollywood dia aseho amin'ny teny Anglisy amin'ny dikantsoratra Espaniola, afa-tsy ny horonantsary ankizy izay lazaina amin'ny teny espaniola.
Loha mankany amin'ny tsena na toeram-pivarotana. Ny fitsaboana kely amin'ny antsinjarany dia hampahatsiahy anao ny blues amin'ny andro raitra.
Vakio bebe kokoa momba ny toetrandro any Meksika .
Fitaterana sy fitsangatsanganana tany Meksika
5 amin'ireo Park RV tsara indrindra any atsimo afovoan'i Meksika
Casa Del Mar Golf Resort & Spa Los Cabos Meksika
Ireo toeram-ponenana miisa 6 lehibe indrindra ao Meksika
Femme Dengue any Meksika
Ny (Somewhat) Lalana Shady Ny Miles Miles Gurus dia nahazo ny Free Flights
Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena any Phoenix Sky Harbor
Paris Museum Night (Nuit des Musees): 2018 Guide
Hetsika Halloween ao Sacramento
10 Toerana lehiben'ny sakafo any Harlem
Mandany ny fialantsasatra any San Antonio
Eo amin'ny sehatry ny fitafiana Eoropeana sy ny fivoaran'ny habeny
Tokony hampiakatra ny sezafiandrianao ve ianao rehefa manamboatra sambo?
Corinthia Hotel Prague: Hotel Luxury miaraka amin'ny fomba fijery tsara indrindra any an-tanàn-dehibe
Ny fihazakazahana tsara indrindra ao Oahu
Tea à Asia
Manomàna ny dianao ho any Long Beach Gay Pride 2018
Toerana fitsangatsanganana spa any Western Washington
Aiza no hialana amin'ny Asiatique